Abavelisi beMveliso | KwiChina Iimveliso eziBoneleli, kwiFektri
Idiphu Hot kwalenza namacala socket intloko evulwa
Umda wangaphandle wesikrufu sentloko ye-hexagon socket head bolt is round, kwaye umbindi ulingana ne-hexagonal, ngelixa i-hexagonal bolt yeyona eneentloko ezixhaphakileyo zokujija ezinemiphetho enamacala amathandathu. Emva unyango umphezulu galvanizing komhlaba, isiphumo anti-umhlwa iyafezekiswa.
Hot Isefu zangaphandle Hexagon Bolt
Maninzi amagama e-bolt engaphandle ye-hexagonal bolt, umzekelo, inokubizwa ngokuba yi-bolt yangaphandle ye-bolt, umzekelo, inokubizwa ngokuba yi-bolt yangaphandle ye-hexagonal bolt. Ikwabizwa ngokuba yi-bolt yangaphandle enamacala. Konke oku kuthetha into enye. Kungenxa yokuba imikhwa yobuqu yahlukile.
Iinqwelo ze-hex zensimbi ezingenasici
Amantongomane e-stainless steel hex asetyenziswa ngokudibanisa neebholithi kunye nezikrufu ukudibanisa kunye nokubopha iinxalenye. Phakathi kwazo, Chwetheza 1 ii-nati-zenjongo ezintandathu zezona zisetyenziswa kakhulu. Amandongomane eBakala C asetyenziswa koomatshini, kwizixhobo okanye kulwakhiwo olunomphezulu ombi kunye neemfuno ezichanekileyo ezisezantsi.
Umsila wesikhonkwane somsila ubukhulu becala ubume bomsila wokugrumba okanye umsila obukhali, ohlala ngokukhawuleza kwintengiso ngenxa yokusetyenziswa kwayo ngokulula kunye nokusebenza ngokulula. Isikhonkwane somsila wokugrumba ungasetyenziselwa ukugrumba imingxunya kwizinto ezahlukeneyo ezisisiseko ukuze uqonde ukukhawulezisa ngokukhawuleza kunye nokuhlangana, unamandla okunamathela ngokuqinileyo, akukho lula ukukhulula kunye nokuwa, kulula kakhulu kwaye kulula ukuyisebenzisa, kwaye inokhuseleko oluphezulu.
I-nut eshushu eshushu yafaniswa ne-hot-dip galvanized bolt, oko kukuthi, i-nut esebenza ngokutsha ixhomekeke kunyango olushushu lokudibanisa. Ngenxa yokuba i-galvanizing eshushu igutyungelwe nge-zinc, ukuphinda uyisebenzise kubalulekile. I-galvanizing eshushu ibonakaliswa ngumhlaba ongagudlukiyo kodwa ukuxhathisa okunamandla komhlwa. Ngokuqhelekileyo isetyenziselwa ngaphandle kwaye ine-4.8, 8.8, 10.9 kunye ne-12.9 yamandla aphezulu.